अध्याय १०३ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई नै हल्लाउँदै एउटा गर्जनयुक्त आवाज बाहिर निस्कन्छ। यो यति कर्णभेदी छ कि मानिसहरू यसबाट समयमै छलेर उम्किन सक्दैनन्। कोही मारिन्छन्, कोही नष्ट हुन्छन् अनि कोही चाहिँ न्यायमा पर्छन्। यो साँच्चै एउटा रमिता हो, यस्तो कसैले कहिल्यै देखेको छैन। ध्यानपूर्वक सुन: गर्जनको गडगडाहटहरूको साथमा विलापको आवाज छ अनि यसको आवाज पातालबाट आउँछ। यो नर्कबाट आउँछ। यो ती विद्रोहका पुत्रहरूको तीतो आवाज हो जसलाई मैले न्याय गरेको छु। मैले भनेको नसुन्‍नेहरू र मेरा वचनहरूलाई व्यवहारमा नउतार्नेहरूलाई कडा प्रकारले न्याय गरिएको छ र तिनीहरूले मेरो क्रोधको श्राप पाएका छन्। मेरो आवाज न्याय र क्रोध हो, म कसैलाई नरम व्यवहार गर्दिनँ अनि कसैलाई कृपा देखाउँदिन कारण म स्‍वयम्‌ धर्मी परमेश्‍वर हुँ अनि म क्रोधले भरिएको छु, अनि म ज्वलनले, शुद्धीकरणले, अनि विनाशले भरिएको छु। ममा केही पनि लुप्त अथवा भावनात्मक छैन तर यसको विपरीत, हरेक कुरा खुला, धर्मी तथा निष्पक्ष छ। मेरा सबै ज्येष्ठ पुत्रहरू सबै जातिहरू र मानिसहरूलाई न्याय गर्दै मसित मेरो सिंहासनमा भएकाले अहिले ती अन्यायी र अधर्मी कुराहरू तथा मानिसहरूको न्याय हुन सुरु हुँदैछ। म तिनीहरूलाई एक-एक गरेर जाँचपडताल गर्नेछु र कसैलाई नछुटाइकन तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले प्रकट गरिदिनेछु। किनकि मेरो न्याय पूर्ण रूपले प्रकट गरिएको छ र पूर्ण रूपले खुला गरिएको छ, मैले कुनै कुरा बाँकी राखेको छैन; मेरो इच्छासित मेल नखाने कुनै पनि कुरालाई म फ्याँकिदिनेछु, र यो अतल कुण्डमा सारा अनन्तसम्मै नष्ट भएको होस्। म त्यसलाई त्यहाँ सदाभरिको लागि जल्न दिनेछु। मेरो धार्मिकता यही हो र मेरो निष्ठा यही हो। कसैले यसलाई बदल्न सक्दैन र सबै मेरो हुकुममुनि आउनैपर्छ।
संसारका महाविपत्तीहरू प्रतिदिन झन् ठूलो भई बढ्दछन् र मेरो घरमा विनाशकारी महाविपत्तीहरू झन् शक्तिशाली रूपले बढ्दछन्। मानिसहरूको साँच्चै लुक्ने ठाउँ कतै छैन, आफैलाई लुकाउने ठाउँ कतै छैन। अहिले सङ्क्रमणकाल भइरहेको हुनाले मानिसहरूले आफ्नो अर्को कदम कहाँ राख्ने हो, तिनीहरूलाई थाहा छैन। यो मेरो न्यायपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ। याद राख! मेरो कामका कदमहरू यिनै हुन् र मैले काम गर्ने तरिका यहि नै हो। मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई एक-एक गरेर म सान्त्वना दिनेछु र कदम-कदम गरी तिनीहरूलाई माथि उठाउनेछु। सेवाकर्ताहरूको सम्बन्धमा चाहिँ, म तिनीहरू सबैलाई एक एक-गरेर नामेट गरिदिनेछु र त्यागिदिनेछु। मेरो व्यवस्थापन योजनाको एउटा भाग यही हो। सबै सेवाकर्ताहरूलाई प्रकट गरिसकिएपछि मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई प्रकट गरिनेछन्। (मेरो निम्ति यो अत्यन्तै सजिलो छ। तिनीहरूले मेरा वचनहरू सुनेपछि, न्याय र मेरा वचनहरूको त्रासको सामु ती सबै सेवाकर्ताहरू विस्तारै पछि हट्नेछन् र केवल मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरू मात्र बाँकी रहनेछन्। यो कुनै स्वैच्छिक कुरा होइन, न त मानव इच्छाले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा नै हो, बरु यो त आत्माले व्यक्तिमा काम गर्नु हो।) यो कुनै परको घटना होइन अनि तिमीहरूले मेरो काम र मेरा वचनहरूको स्थिति भित्रबाट केही हदसम्म यसलाई अनुभूति गर्न सक्नुपर्ने हो। यति धेरै कुराहरू र पूर्वानुमान गर्न नसकिने प्रकृति भएका मेरा वाणीहरू मानिसहरूको निम्ति अगम्य छन् भनेर म किन भन्थें। मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूसँग म सान्त्वना, कृपा र प्रेमको भाकामा बोल्छु (किनभने म यिनीहरूलाई सधैँ अन्तर्दृष्टि दिन्छु अनि म तिनीहरूलाई छोड्नेछैन कारण मैले तिनीहरूलाई पूर्वनियुक्त गरेँ), तर म मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूबाहेक अरूलाई कठोर न्याय, धम्की र त्राससहित व्यवहार गर्नेछु र तिनीहरूलाई निरन्तर त्यस बिन्दुसम्म डरको अनुभूति गराउनेछु कि तिनीहरू सधैँ व्याकुल अवस्थामा रहेका होऊन्। परिस्थिति एउटा निश्चित हदसम्म पुगेपछि, तिनीहरू यस अवस्थाबाट उम्कनेछन् (जब म संसारलाई नष्ट गर्छु, यी मानिसहरू अतल कुण्डमा हुनेछन्), तापनि तिनीहरू मेरो हातको न्यायदेखि उम्‍कनेछैनन् वा यस परिस्थितिदेखि कहिल्यै मुक्त हुनेछैनन्। तिनीहरूको न्याय यही हो, तिनीहरूको सजाय पनि यो नै हो। विदेशीहरू आइपुग्ने दिनमा म यी मानिसहरूलाई एक-एक गरेर प्रकट गर्नेछु। मेरो कामका कदमहरू यिनै हुन्। के मेरा ती वचनहरूको अघिल्लो वाणीहरूपछाडि रहेको अभिप्रायलाई तिमीहरू अहिले बुझ्छौ? मेरो विचारमा पूरा नभएको कुनै पनि कुरा समेत पूरा भइसकेको कुरा हो, तर पूरा भइसकेको कुनै कुरा हासिल गरिएको कुरा हो भन्ने छैन। यसको कारण मसित आफ्नै बुद्धि छ र मेरो आफ्नै काम गर्ने तरिका छ, जुन मानिसहरूका निम्ति केवल रहस्यमय छन्। यस चरणद्वारा मैले परिणामहरू हासिल गरिसकेपछि (जब मेरो विरोध गर्ने सबै दुष्टहरूलाई मैले प्रकट गरेको हुन्छु), म अर्को कदम सुरु गर्नेछु, किनभने मेरो इच्छा निर्विघ्न छ र मेरो व्यवस्थापन योजनालाई अवरुद्ध गर्ने साहस गर्न कसैले सक्दैन, अनि कुनै कुराले बाधाअड्चन खडा गर्ने साहस गर्न सक्दैन—तिनीहरू सबैले बाटो सफा गर्नुपर्छ! ठूलो रातो अजिङ्गरका सन्तानहरू, मेरो कुरा सुन। मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई हासिल गर्न, तिमीहरूका पितालाई लज्जित तुल्याउन (यी वचनहरू ठूलो रातो अजिङ्गरका सन्तानहरूलाई लक्षित गरिएका हुन्), मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई आड दिन र मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूमाथि गरिएको खराबीलाई सच्याउन म सियोनबाट आएँ र मैले संसारमा देहधारण गरेँ। त्यसैकारण, फेरि पशु जस्तो नहोऊ; म मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई तिमीहरूसित निराकरण गर्न लगाउनेछु। विगतमा मेरा पुत्रहरूलाई दमन गरिएको थियो र थिचोमिचो गरिएको थियो अनि पिताले उहाँका पुत्रहरूका निम्ति शक्ति चलाउनुहुने भएकोले मेरा पुत्रहरू मेरो प्रेमिलो अङ्गालोमा फर्केर आउनेछन् र अब उप्रान्त तिनीहरू दमन र थिचोमिचोमा पर्नेछैनन्। म अधर्मी छैन, यसले मेरो धार्मिकतालाई देखाउँछ र यो साँच्चै “मैले प्रेम गर्नेलाई प्रेम गर्नु र घृणा गर्नेलाई घृणा गर्नु हो”। यदि तिमीहरू म अधर्मी हुँ भनी भन्छौ भने तिमीहरू हतार गरेर बाहिर निस्कनुपर्छ। निर्लज्ज भएर मेरो उदारताको फाइदा लिएर मेरो घरमा नबस। तँ हतार गरेर आफ्नो घरमा फर्कनुपर्छ ताकि मैले अब उप्रान्त तेरो मुहार देख्न नपरोस्। अतल कुण्ड नै तिमीहरूको गन्तव्य हो अनि त्यहीँ नै तिमीहरूले विश्राम लिनेछौ। यदि तिमीहरू मेरो घरमा छौ भने तिमीहरूका निम्ति अब उप्रान्त त्यहाँ कुनै ठाउँ छैन किनकि तिमीहरू भारी बोक्ने पशुहरू हौ; तिमीहरू केवल मैले प्रयोग गर्ने औजारहरू मात्रै हौ। जब मैले तिमीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने कुनै खाँचो हुँदैन, तब तिमीहरूलाई भस्म गर्न म तिमीहरूलाई आगोभित्र फ्याँकिदिनेछु। यो मेरो प्रशासनिक आदेश हो; मैले यसलाई यसरी नै गर्नुपर्छ, अनि केवल यसले मात्र मैले काम गर्ने तरिका प्रकट गर्नेछ र मेरो धार्मिकता र मेरो वैभव प्रकट गर्दछ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, यसरी मात्रै मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरू मसित शक्तिका साथ राज्य गर्न पाउनेछन्।
अघिल्लो: अध्याय १०२
अर्को: अध्याय १०४